Ugu Weyn Ee Dill
Mid kasta oo naga mid ah waa la yaqaan dill cagaaran, qurxiyo caraf udgoonkiisa. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee qurxinta suxuunta iyo siinaya dhadhan. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa og in geeddaan aan cakirnayn sidoo kale ay leeyihiin sifooyin bogsiin leh. Maqaalkani waxaan eegeynaa sida dillku u yahay faa'iido u ah jirka bani'aadamka iyo waxa ay yihiin waxyaalaha ka horjeeda isticmaalka.
Siyaabaha dillinta goosashada ee xilliga jiilaalka
Warshad loo yaqaanno dill ayaa loo yaqaan dhammaan dadka. Waxaa loo isticmaalaa saladh, oo loo isticmaalo wax soo saarka marinades iyo pickles, oo la cuno cuntooyin kala duwan. Dhamaan mahadsanida dhadhanka gaarka ah ee dill, kaas oo, marka lagu daro tan, sidoo kale waa dukaanka of vitamins kala duwan. Dabcan, waxaan rabaa in aan isticmaalo alaabtan oo idil sanadka oo dhan, ka dibna waxaa jira dhibaatooyin: dillku waa la kaydiyaa wakhti gaaban oo qaboojiyaha ah, cagaarka dukaanku wuxuu inta badan ka soo baxaa cawska.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dill 2019